LXQT: ၎င်းသည် DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တို့တွင်မည်သို့ရှိသနည်း။ | Linux မှ
LXQT အခြားအလင်းနှင့်အစာရှောင်သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်၏အစ်ကို LXDE နောက်တစ်ခုကဲ့သို့ web ပေါ်မှာအခြားပိုမိုလူကြိုက်များပြီးအသုံးပြုသောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားများသောအားဖြင့်တော့မရှိနိုင်ပါ။ ဥပမာ၊ နောက်ဆုံးပို့စ် အသေးစိတ်ဖော်ပြပါ LXQTလွန်ခဲ့သော5နှစ်က ဗားရှင်းနံပါတ် 0.9.0.
အတူတူအဖြစ် LXDE, များသောအားဖြင့်ရှိပါတယ် GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုများ ဒါကပါဝင်သည် ပုံမှန် Desktop Environment။ ထို့ကြောင့်၊ ဤစာစောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးအာရုံစိုက်မည် ဒါဟာဘာလဲ? y သင်မည်သို့တပ်ဆင်မည်နည်း။။ သင်တန်း၏လက်ရှိအလေးပေး DEBIAN GNU / Linux metadistribution၎င်း၏လတ်တလော၌တည်၏ ဗားရှင်း, အ အရေအတွက်အား 10, ကုဒ်နာမည် buster။ ဘယ်လက်ရှိလည်းများအတွက်အခြေခံသည် Distro ပါ MX-Linux 19 (Ugly Duckling).
"LXQt သည်ပေါ့ပါးသည့် Qt desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းလမ်းမရတော့ဘူး သင်၏စနစ်သည်ပျက်ပြားခြင်းသို့မဟုတ်နှေးကွေးခြင်းမရှိပါ။ ဒါဟာခေတ်မီအသွင်အပြင်နှင့်အတူတစ် ဦး ဂန္စားပွဲခုံဖြစ်အာရုံစိုက်သည်။ LXQt ကို Linux နှင့် BSD ဖြန့်ဝေမှုအများစုတွင်ထည့်ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်၏ပုံမှန်စနစ်သို့မဟုတ် VM တွင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို GitHub ရှိ LXQt Wiki တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ LXQt သည် LXDE-Qt ၏ LXDE ၏ Qt အရသာနှင့် Razor-Qt တို့အကြားပေါင်းစည်းခြင်း၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိ LXQt နှင့်တူသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် Qt-based Desktop Environment ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ LXQt သည်တစ်နေ့တွင် LXDE ကိုဆက်ခံသူဖြစ်လာသည်။ သို့သော် 09/2016 ခုနှစ်မှစ၍ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်နှစ်ခုလုံးသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ " တရားဝင် LXDE ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ "အကြောင်း"
1 အားလုံး LXQT အကြောင်း
အားလုံး LXQT အကြောင်း
LXDE ယခုနှစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြန့်ချိခဲ့သည် 2013 ထိုင်ဝမ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်အားဖြင့် Hong Jen ရီ ပြီးသွားတဲ့အခါ PCManFM-Qt, ပထမ ဦး ဆုံး desktop ကို module ကို QT။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, အပြည့်အဝစားပွဲ LXQTရရှိနိုင်အောင်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ အသစ်, ခေတ်သစ်နှင့်ပေါ့ပါး Desktop ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် အနိမ့်စွမ်းအင်နှင့်အရင်းအမြစ်စားသုံးဖြန့်ဝေလုံးဝ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲ LXDE.
LXQT အဓိကအားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် QT5 နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို KDE မူဘောင် ၅.၄၂။ ထိုအကလက်ရှိအားဖြင့်တတ်၏ 0.14.1 ဗားရှင်း (တည်ငြိမ်သော) ။ ၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်ပြည့်စုံဗားရှင်းဖြစ်ခဲ့သည် 0.7.0, စီမံကိန်းများ၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ကုန်အဖြစ်, မေလ 7, 2014 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် သင်တုန်း -Qt y LXDE.
LXQT ကတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည် တရားဝင် repositories အများအပြားအတွက် GNU / Linux DistrosDEBIAN, Ubuntu နှင့် Fedora ကဲ့သို့သော အချို့မှာအရင်းအမြစ်နည်းသောသုံးစွဲမှုအဖွဲ့များကိုအာရုံစိုက်သည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာကြသည်။
El လျှောက်လွှာဂေဟစနစ် ဇာတိ LXQT ၎င်းကိုပရိုဂရမ်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအောက်ပါတို့သည်အထင်ရှားဆုံးသို့မဟုတ်လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ PCManFM-Qt (ဖိုင်မန်နေဂျာ), Leafpad-Qt (စာသားတည်းဖြတ်သူ), LXImage-Qt (Image Viewer), များစွာသောအခြားအကြား။
ပေါ့ပါးပြီးပေါင်းစပ်ထားသည့် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထောက်ပံ့ထားသည်CPU နှင့် RAM မှတ်ဉာဏ်အရင်းအမြစ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သောကွန်ပျူတာများအတွက်အသုံးဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းအတွက်လူအများအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် မျက်စိ - ဖမ်းယူ interface ကို ဒါပေမယ့်ရိုးရာအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ။
ဒါဟာအစဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသည် developer များ၏နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း, အဘယ်သူကိုများစွာသောနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည် LXDE.
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ၎င်း၏ LXDE အခြေစိုက်စခန်း၏ modular ဒphilosophနဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်သီးခြားစီအသုံးပြုနိုင်သည် LXQT Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်.
သူ့မှာကိုယ်ပိုင်မန်နေဂျာမရှိပါ, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ကများသောအားဖြင့်အသုံးပြုသည် Openbox။ နှင့်အတူ၎င်း၏ပေါင်းစည်းမှုပေမယ့် XFWM y muffins.
ဒါဟာရှိပါတယ် ဂန္ထဝင်အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင် အပေါ်အခြေခံပြီး၎င်း၏အလားအလာရှိနေသော်လည်း QT5 နှင့် KDE မူဘောင် ၅.
ဒါဟာအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ် နှင့်သင်၏ရောက်ရှိမထားပါဘူး ပထမရင့်ကျက်သော version (၁.၀) သူ့အခြေစိုက်စခန်းကမ်းလှမ်းရန်အလားအလာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်သူ့အသိုင်းအဝိုင်းအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။
သင်ဘယ်နေရာကိုသွားနိုင်သည် လက်တွေ့ကျသောတရားဝင်ကဏ္sectionsများထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ဘလော့ ဝီကီ နှင့်ဖိုရမ်အခြားသူများအကြား။ အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရန်အောက်ပါလင့်ခ်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည် LXDE:
ရွေးပါ LXQT Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် နှင့်အခြား utility ကိုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်း packages များအစုံ။
မှတ်စု: အပေါ်မှာအခြေခံပြီး Desktop Environment ကိုလည်း install လုပ်နိုင်ပါတယ် LXQT အထုပ်ကိုအစားထိုးခြင်းဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူ lxqt အားဖြင့် lxqt-core.
ကိုရွေးပြီး Reboot လုပ်ပါ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် LXQTတစ် ဦး ထက်ပိုသောရှိခြင်း၏အမှု၌ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် installed နှင့်မရွေးချယ်ဘဲလျက် Login Manager lxqt-session.
ထိုအသတိရ, ဒီကနောက်ဆုံးနှင့်ဖြစ်ပါတယ် ဆဌမ post ကို အကြောင်းကိုစီးရီး၏ GNU / Linux Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ။ ယခင်သူများအကြောင်းကိုခဲ့ကြသည် GNOME, KDE Plasma, Xfce, သစ်ကြမ်းပိုး, အိမ်ထောင်ဖက် y LXDE. အခြားသူများစွာလည်းရှိသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ဖြစ်နိုင်ချေထက်ပိုသောအခြားအနာဂတ်ပို့စ်များကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Entorno de Escritorio» ၏နာမအားဖြင့်လူသိများ «LXQT», အစ်ကို «LXDE»သို့သော်ခြားနားချက်နှင့်အတူသူကနည်းပညာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ «QT», အစား «GTK+2»၎င်းတွင်ခေတ်မီကြည့်ရှုသည့်ဂန္ထဝင်စားပွဲခုံတစ်ခုရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုသည် «Distribuciones GNU/Linux»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » LXQT: ၎င်းသည် DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့ရှိသနည်း။
ငါ LXQt ကို Debian 10 မှာနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါသူက Xfce applications တွေ၊ Xfwm composer and window manager တွေယူလာခဲ့တယ်။ အဲဒါဟာကျွန်တော့်ကိုကောင်းစွာပေါင်းစည်းထားပုံမရဘူး။ Apper သည် icon များကိုတင်နေခြင်းမရှိပါ။ update notifier ပျောက်နေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Plasma နှင့်အတူတူပင် distro အတူတူပင်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းစားသုံးသည်။ LXQt သည်သတိလစ်သွားပြီ
မင်္ဂလာပါ, Autopilot ။ ကျွန်ုပ်သည် LXQT နှင့် ၁၅ ရက်ကျော်နေခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်ပြorနာများသို့မဟုတ်နှေးကွေးနေသနည်း။ ၎င်းသည်အလွန်လှပပြီးအလုပ်လုပ်သည်။ သင်လက်ရှိစဉ်းစားနေသောအရာကိုကြည့်ရှုရန်ထပ်မံကြိုးစားပါ။
Debian မှာဘာ version တပ်ထားသလဲ။
0.14.1 သို့မဟုတ် 0.12
ရွှင်လန်း! အာဂမီနို။ 0.14.1 ကိုသုံးပါ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Graphic User Interface (GUI) မှတဆင့် Tasksel command ကိုအသုံးပြုခြင်း
Desktop Environment မှ Console သို့မဟုတ် Terminal ကိုဖွင့်ပါ
လာမည့် command ကိုအမိန့်ကို run:
apt update ကို
lxqt-desktop –new-install ကို install လုပ်ပါ
Tasksel လမ်းညွှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Task Selector) အဆုံးအထိဆက်လုပ်ပါ။
Constrol (သို့) Terminal ကိုဖွင့်ပြီး Ctrl + F1 keys ကို အသုံးပြု၍ super user root session ကိုစတင်ပါ။
LXQT Desktop Environment နှင့်အခြားအသုံး ၀ င်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်း package များကိုရွေးချယ်ပါ။
Tasksel (Task Selector) ၏လမ်းညွှန်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆုံးအထိဆက်လုပ်ပါ။
OpenWifi၊ FPGA နှင့် SDR ကို အခြေခံ၍ wifi ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် open source စီမံကိန်း